Zingaki izilimi ezingafundwa umuntu empilweni yakhe? | Scrolla Izindaba
Zingaki izilimi ezingafundwa umuntu empilweni yakhe?
Uzalelwe ezingxenyeni ezisenyakatho ne-Malawi, Umhleli omkhulu wakwa-Scrolla.Africa u-Everson Luhanga akanayo imingcele makuziwa kwezokufunda.
Kusukela endaweni enganakekile, umuntu wesizwe sama-Tumbuka umama wakhe ovela e-Zambia, uyakwazi ukuqonda nokukhuluma izilimi ezingaphezu kweziyi-10 ezivela emazweni amathathu aseningizimu ne-Afrika.
“EMalawi ngikhuluma isi-Tumbuka, isi-Chewa (esikhulunywa kakhulu) isi-Tonga nesi-Yawo.
“E-Zambia lapho umama wami evela khona, ngikhuluma isi-Bemba nesi-Nyanja,” kusho u-Everson, othe ngemuva kokuza eNingizimu Afrika ngowezi-2004 waqala ukufunda kancane isiZulu, isi-Pedi, isiXhosa, isi-Tswana nesiSwati.
Ukwengeza ohlwini olude lwezilimi azikhuluma ekhaya.
“Ukuba ngumuntu wase-Malawi eNingizimu Afrika futhi ngisebenzela i-Daily Sun ebhekene nabantu asebekhulile kakhulu futhi abakhuluma izilimi zomdabu kwakunzima,” kusho u-Everson echaza indlela afunda ngayo izilimi zobomdabu zaseNingizimu Afrika.
“Bekumele ngifunde izilimi zomdabu noma kunjalo ukuze ngibe yilokhu engiyikho namuhla.”
“Umzuzu omkhulu weqiniso wafika ngesikhathi ngilandela indaba yokubulawa kwabantu eMarikana e-North West. Uzakwethu owayengumthwebuli wami uLucky Maibi wayejwayele ukungitshela ukuthi ngidinga ukufunda izilimi futhi wayejwayele ukungishiya ngedwa phakathi kwabantu bendawo futhi ngenze izinhlovo ngezilimi zendawo,” kwengeza u-Everson.
Ngenkathi esase-Malawi ngesikhathi esakhula, wafunda nesi-Swahili “kubantu base-Tanzania abakhuluma isi-Swahili” njengoba kuyizwe elingumakhelwane ne-Malawi.
Ukuzilolonga kuyashisa ekwenzeni kahle, u-Everson uphinde wengeza ngokuthi ukuhlanganyela nabanye abantu njalo “nabangane abaningi bendawo abakhuluma izilimi ezahlukahlukene njengesi-Pedi nesi-Swati,” nakho kumsizile wajwayela izilimi ezahlukene. Ngangisondelene nabangane abanjalo engafunda kubo ulimi lwabo lwebele.
Ungakwazi yini ukukhuluma izilimi eziningi nawe?
Ngenela umncintiswano wethu – bese uwina umakhalekhukhwini wakwanokusho omusha sha.